महिला स्वास्थ्य अन्यथा यो बुरा हुन सक्छ, कायम गर्न आवश्यक छ। तर औषधि को स्वागत सधैं, सम्भव प्रभावकारी र expedient छ। कहिलेकाहीं यो घटक को गतिविधि बलियो बनाउन आवश्यक छ। र यहाँ पूरक आहार को सहायता गर्न आउँछ, समीक्षा जो "स्टेला", तल प्रस्तुत गरिनेछ।
यो तपाईं के अवस्थामा लाग्न सक्छ मतलब? एक गैर-हर्मोन पूरक एक बिरूवा आधारित - खराब "स्टेला", मूल्य लगभग 800 rubles छ। यो मात्र उपचार उपाय प्रयोग गर्न सकिँदैन ताकि हुन, एक दबाइ छैन, तर यो औषधी र हर्मोन मा सकारात्मक प्रभाव र महिलाको शरीर को गतिविधि बृद्धि गर्न सक्षम छ। BAA "स्टेला", यस्तै प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ कि analogues, निम्न समस्याको लागि संकेत छ:
प्रजनन प्रणालीको क्यान्सर र precancerous अवस्था।
तर यो एक अतिरिक्त मात्र थप उपकरण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर दोहर्याउँदै फलाउँछ।
Contraindications, साइड इफेक्ट र सावधानीहरु
BAA "स्टेला", समीक्षा जो धन को प्रभावकारिता व्यावहारिक कुनै contraindications छ प्रमाण दिन्छन्। व्यक्तिगत घटक additives मात्र lactation र गर्भावस्था को समयमा असम्भव, साथै घृणाको को मामला मा भर्ना।
यस अतिरिक्त पनि हालतमा परीक्षण मा पूर्ण अहानिकारक र सुरक्षित छ भनेर साइड इफेक्ट लागि जाँदा, तिनीहरूले, पहिचान गरिएको छ।
हामी मात्र औषधिको खुराक संग पालन र निर्देशनहरू पालना चाहिने सावधानीहरु कुरा भने। त्यसैले, यो एक दिन दाना तीन पटक लिन आवश्यक छ। सुविधाको लागि, तिनीहरूले तपाईं र के खान बाहिर क्रमबद्ध गर्न अनुमति दिने, विभिन्न रंग मा चित्रित छन्। अन्तिम स्वीकृति कम्तिमा एक घण्टा हुनुपर्छ पछि, अन्यथा घटक प्रत्येक अन्य गतिविधि कम गर्नेछ।
पूरक आहार "स्टेला" प्रभावकारी छन्? समीक्षा यसलाई बाहिर आंकडा गर्न मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, त्यहाँ जो समस्या गोदभराई छन् महिला छन्। र आफ्नो लामो-प्रतीक्षा गर्भावस्था सिक्न केही समय पछि पूरक तिनीहरूले लिइरहेको पछि। साँच्चै, घटक को वाहेक अन सकारात्मक प्रभाव प्रजनन प्रणाली।
यसलाई उत्कृष्ट साबित र यो mastitis को उपचार मा छ। स्वागत मात्र 2-3 महिना पछि कमजोर सेक्स को धेरै प्रतिनिधिहरु सुधार चिन्ह लगाइयो। स्तन केही nodules लगभग समाधान हुन्छ। यो पनि दुखाइ मा एक कमी प्रख्यात थियो।
जो पूरक "स्टेला" लिए महिला, पीएमएस त उच्चारण गरेनन् र महिनावारी कि थप सजिलै र painlessly छन् याद गर्नुहोस्। यसबाहेक, सामान्य menstrual चक्र अवधि छैन रूपमा प्रशस्त छन्।
भनेर दबाइ (लगभग 70-80%) लिएर बहुमत सकारात्मक प्रभाव रिपोर्ट। सूचना एकाइ मात्र quickening लिदा urination छ। यो शायद हरियो चिया निकाल्ने सामाग्री कारण हो।
निष्कर्षमा, यो सबै आहार पूरक "स्टेला", लिएको हुनुपर्छ प्रतिक्रियाहरू माथि दिइएको थियो जो कि थपियो हुन सक्छ केवल एक डाक्टर परामर्श पछि।
महिलाहरु को लागि माछा तेल को लाभ: सिफारिसहरू, contraindications
खाद्य पदार्थ ठूलो परिमाणमा भिटामिन युक्त। के खाद्य पदार्थ भिटामिन बी समावेश?
प्रतिरक्षा लागि आहार भिटामिन मिश्रण
मानसिक दिमित्री Volkhov। रिसेप्शन, प्रतिक्रिया
कुलीन ब्रांडीको - लामो इतिहास संग पेय
प्रक्रिया गति गर्न एन्टिबायोटिक कसरी उत्सर्जित र कसरी
विकिरण र रासायनिक निगरानी: सामान्य आवश्यकताहरू, मापको औजार र सिफारिसहरू